Afọ 10 agafeela kemgbe ọganiihu mgbasa ozi 'Get a Mac' | Esi m mac
Afọ 10 agafeela kemgbe mgbasa ozi 'Get a Mac' na-aga nke ọma
Onye agha kachasị mma nke ebe nchekwa nke na-echeta mkpọsa a na-aga nke ọma nke Apple rụrụ ma metụtara Macs: Get a Mac. Nnukwu mkpọsa mgbasa ozi a gosipụtara uru nke ịnwe Mac na PC "agwụ ike" ọ na-ekpughekwa ụfọdụ akụkụ nke PC ma e jiri ya tụnyere Macs ọhụrụ. O doro anya na ọ kpatara nnukwu mmetụta ebe ọ bụ na ọ bụ ihe dị ka mkpụmkpụ 66 mana kpụ ọkụ n'ọnụ nke Mac na PC yiri mmadụ na-ekwu maka nkọwa nke otu na nke ọzọ.
O doro anya na ebumnuche nke ọkwa ndị a emeghị n'otu izu, a na-ekwu ya Ha jiri ọnwa asaa rụọ ọrụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi nke were ihe dị ka afọ atọ. na nke ahụ kariri otu n’ime ndị ahụ nọ na YouTube. Ndị otu mgbasa ozi ndị a na-echeta afọ iri mgbe nke ahụ gasịrị na nnukwu ọrụ ahụ na ọrụ ọ na-anọchi anya na-arụ ọrụ maka onye na-achọ ka Apple CEO Steve Jobs. Nke a bụ otu ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi a na-aga nke ọma:
Steve Jobs, nwere oke ụta maka afọ atọ ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ bụ ya tụpụtara ha ka ha mee usoro mgbasa ozi a, ọ bụkwa Jobs mere ka ha megharịa ọnụ ọgụgụ dị mma nke mgbasa ozi maka ịghara ịbụ "zuru oke" dị ka onye nduzi okike nke “Get a Mac”, Eric Granbaum, na-echeta taa.
Ndị a bụ akụkụ nke akụkọ mgbe ochie "Get a Mac" na ha malitere oru na 2006, ma enwere ọtụtụ ndị ọzọ:
Obi abụọ adịghị ya, ndị a bụ mgbasa ozi nke ọ nwere ike ọ gaghị amasị onye ọ bụla ma ọ bụ na o doro anya na ha enweghị ihe ọ bụla gbasara mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ Cupertino ugbu a, mana n'oge ahụ ihe kacha mma maka Apple bụ ụdị a mkpọsa nke gosipụtara akụkụ ụfọdụ nke PC ma e jiri ya tụnyere Macs. Ihe doro anya bụ na ha kara akara n'ihu na mgbe ọ gachara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Afọ 10 agafeela kemgbe mgbasa ozi 'Get a Mac' na-aga nke ọma
OS X 10.7.5 Ọdụ ma ọ bụ karịa ka achọrọ iji melite na macOS Sierra
tvOS 10.1 ma lelee watchOS 3.1.1 na eze